Qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray koontarool laga ilaaliyo xarunta Madaxtooyada Soomaaliya oo kuyaala agagaarka Isgooska Sayidka ee magaalada Muqdisho.
Sida aan warraka ku helnay gaariga qarxay ayaa taagnaa goob lagu hubiyo gaadiidka doonaya in ay ka gudbaan koontaroolka una socda dhinaca Madaxtooyada, waxaa sidoo kale goobta qaraxa ka dhacay taagnaa gaadiid kale oo sugayay in wadada maraan.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxan goordhaw ka dhacay magaalada Muqdisho , waxaana dadka qaraxa waxyeelada kasoo gaartay kamid ah dad shacab ah oo ka agdhawaa goobta uu qaraxu ka dhacay.
Ciidamada amaanka dowlada Soomaaliya ayaa si deg deg ah u xiray aaga uu qaraxu ka dhacay, waxaana dadkii waxyeelada soo gaartay goobta ka qaaday gaadiidka gurmadka deg dega loo yaqaan ambalaasta.
Laamaha amaanka dowlada Soomaaliya ayaan wali ka hadlin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxan goordhaw dhacay, waxaana saraakiil katirsan booliiska sheegeen in la baarayo qaraxan iyo khasaaraha uu reebay.